Uma ibhange umboleki kukhona isimo inkinga inqubo enkokhelweni loan, iningi labantu izimo ugcina kuphunywa nezinkantolo emalini ebolekwe amabhange. Kufanele kuqondwe ukuthi lena senguquko elala isakhiwo zezimali, futhi ngemva inkantolo liyothatha isinqumo salo siqu, une cishe abakwazi ngandlela-thile kuphazamise isimo samanje.
Ngemva bailiffs umusho kubangele abulawe yayo. Kuyaphawuleka ukuthi izinkantolo imali amabhange aphethwe kaningi lelo ngenxa yezizathu zokuthi yisikhungo sezinhlangano eziphambili zezezimali azi kahle ukuthi bailiffs abe igunya kakhulu, ebanzi kakhulu, kusukela kungenzeka ngokugodla amaholo ziphethe ukususwa kwempahla siqu. Ngakho, ngo-uvikeleke ngempumelelo ngesikhathi kuqulwa icala lakhe ezokwenza ngqo zincike yimalini ngeke akweleta yasebhange futhi ukuthi kufanele sikwenze.
Indlela ukuvikela izithakazelo zabo
Ukuze izinkantolo kuleyo ayeyiboleke amabhange babe ephumelela kunazo, abaphendulile kufanele ukuqoqa ulwazi ngangokunokwenzeka, kuhlanganise indawo yomhlangano, izimfuneko okucacile yasebhange nokuningi. Ezinye zalezi imibuzo ulula manje uphendukela-inthanethi, okusho ukuthi awukwazi ngisho badinga ukuphuma ekhaya lakho, kodwa ukuze uthole imininingwane ebalulekile ngempela, kudingeka sibe sizonikeza ukufinyelela ngqo inkantolo, okuzodingeka ukukunikeza izinto icala okwengeziwe isibuyekezo.
Kubhekwe le mininingwane, sizokwazi ukuthi unganquma ukuthi zilungele ukugcwalisa isidingo esibekwe ibhange noma, uma ungakakulungeli, lokho okuyingxenye uya inselelo. Kufanele ngokushesha kuphawulwe ukuthi iningi labantu amacala ezinkantolo amabhange sokubolekwayo zokugcina izinyanga 3-12, ngakho udinga uzilungiselele inqubo sasivumela eside.
Wazi kanjani endaweni yomhlangano
Uma wazi ukuthi uzobe uMfu ajenda okuholela, kulesi simo, wena cishe unombuzo mayelana nenqubo wenziwa kuphi futhi nini, njengoba ajenda kuhlanganisa lonke ulwazi. Nokho, umkhuba libonisa ukuthi ngokuvamile inkantolo ne ebhange ungentiwa ngenombolo bunzima, ngakho nizame ukuzizuzela futhi pre-uhlole imininingwane posted ku-website ye inkantolo. Ngale ndlela uyokwazi hhayi kuphela ukuze bazivikele amaphutha kungenzeka phezu ingxenye izisebenzi enkantolo, kodwa nakuSathane Ukulimaza, lapho abameleli ngezikhathi yakhetha kwamanye amabhange noma iqoqo ejensi ukuze acindezele ababoleka yabo. Yiqiniso, ngaso sonke isikhathi i-falsification kwemibhalo Kwenziwa lapho ebanjwa enkantolo nge loan ebhange, oyisazi kusikisela ukuthi kunalokho kujwayelekile, kodwa uma abanjwe ngayo ku inkampani enjalo, kufanele uchithe okuningi nezinzwa kanye nesikhathi ukuqinisekisa ukuthi ukuqeda lezi zinkinga.
Kuthiwani uma wathumela hhayi kuphela ajenda
Kwezinye izimo, awukwazi ukuthumela ajenda, futhi ngesikhathi esisodwa wonke amaphepha, kuhlanganise ikhophi isikhalazo ebhange, kanye nokuzimisela ukuqokwa kwecala eziningi nezinye amarekhodi. Kuzo zonke lezi amaphepha ingatholakala kalula igama Isivivinyo, ikheli indawo lesikhungo, kanye nesikhathi esiqondile nosuku ngoba okwakusendlini eliyifa okuhleliwe lomhlangano. Nakuba amacala falsification kwemibhalo cishe ziphinde zenzeke, kusenzima engcono waphinda nje uye kuwebhusayithi ye enkantolo futhi uhlole ulwazi oludingayo, njengoba konke lapha incike indlela inkampani eqhuba inkantolo ne ebhange. ochwepheshe lezivakashi bathi kwezinye izimo, amabhange aye ayisebenzisa kaningi izindlela ezihlukahlukene ukuze bathole leli cala.
Ngo iningi labantu amacala umane ufake igama lakhe, kodwa kwezinye izimo akusebenzi futhi udinga ukwenza ucwaningo isivele nemingcele ezengeziwe, ezifana inombolo yecala, usuku irisidi yayo kanye nedlanzana labanye. Akukhona njalo ababoleka ingakwazi ukuthola ngesikhathi esifanele ajenda kanye nezinye izincwadi ezisemthethweni. Kwezinye izimo kwenzeka ukuthi nokufakwa umyalezo isikhalazo enkantolo ngenxa yokungakhokhi wesikweletu iza ngezinye izindlela, kuhlanganise, ngokwesibonelo, ucingo ukuze lo muntu obolekayo evela ehhovisi noma umuntu nje uyazi ukuthi icala, enqubeni zokuxoxisana nebhange lakho .
Lokho Okufanele Ukwazi
Kungakhathaliseki ukuthi okufundile kudlule kanjani isahlulelo kuma-loan kwasekuqaleni udinga ukuthola igama izinkantolo zokwahlulela, kanye nesikhathi esiqondile wachitha ehlezi. Kakade amaphoyinti aphezulu kungenziwa kwaphikiswana ke ngokusebenzisa iwebhusayithi senkantolo, njenge:
ngokoqobo ehleliwe emhlanganweni;
aphoyintimenti ngesikhathi esithile kwemihlangano;
onjani ijaji uzowezwa icala.
Uma ungazi ukuthi yini ncamashi inkantolo safakwa ngo-loan, kufanele uhlole ezimbalwa ongakhetha kuzo, njengoba namhlanje, isikhungo ngasinye zokwahlulela khona iwebhusayithi siqu. Okokuqala nokusemqoka, sincoma ukuthi uzijwayeze esizeni inkantolo yakho wesifunda, obhekisela indawo lapho uhlala khona. Uma kwenzeka ukuthi kwi-website ye inkantolo ephathelene indawo yakho yokuhlala, akukho ulwazi mayelana icala lakho, khona-ke isidingo ukuhlola nezinye izinketho, okungase ukufaka icala enkantolo ne ebhange (mina SP, isibonelo, indlela usengakwazi hlola izinkantolo endaweni sokubhalisa ibhizinisi).
Hlola website enkantolo yesifunda endaweni indawo ebhange. Ngaphezu kwalokho, ungenza ucingo ngqo ebhange ngokwayo ukuqinisekisa ukuthi banayo yonke imininingwane edingekayo. Uma kungekho inguqulo yalesi uhlu ungavumeli ukuba uthole ulwazi ngale ndaba, khona-ke, cishe, wena edukisayo, ezama ukwesabisa kanye indlela enkantolo nge ebhange, kodwa eqinisweni isimangalo ayizange sigcwalisiwe.
Kanjani ukuze uthole ifayela icala
Ngaphambi ulungiselela Isivivinyo, kumelwe uqonde ukuthi izidingo phambili ibhange lakho futhi yini asetshenziswa izingxabano zawo okufinyelela imigomo. Ungakhohlwa ukuthi inkantolo nebhange loan - ke umcimbi sibi kakhulu, kodwa lolu lwazi akuyona imfihlo futhi akunzima kangako ukuze uthole ukufinyelela kuwo. Ezimweni eziningi, isimangalo okukhethekile of ebhange kuhlanganisa yonke idatha okudingayo, futhi ngesikhathi esifanayo, unelungelo ukuzisebenzisa.
Can bethumela Bank
Kwezinye izimo, ikhophi isikhalazo ngeposi ngqo umboleki, kodwa ngaso sonke isikhathi waphawula, lapho kokuba inkantolo ne ebhange. I oyisazi busikisela ukuthi leli akulona simo ezivamile, kodwa uma kwenzeka, khona-ke ngokuqinisekile plus. Ngaphezu kwalokho, uma uthola igama lakho kwi website seNkantolo, kodwa angakawamukeli ikhophi isimangalo imeyili, ukube bekunjalo ungalindi ke, ngenxa yokuthi ungene zokuchitha nje isikhathi sakho - okungcono nje uzijwayeze ngazo zonke izinto ezidingekayo ukuze aye enkantolo.
Ngokusemthethweni, ukuthola imininingwane kanjani inkantolo izobanjelwa nebhange ngenxa yokungakhokhi imalimboleko, uzodinga ukuxhumana ihhovisi lesikhungo kunoma yiziphi izinsuku ukusebenza. Kodwa lo mkhuba, futhi, lithi iningi labantu amacala ifayela icala njalo ibekwe ukuze lejaji elizohola sizoxoxa icala. Reception amahora amakholwa ngabahluleli bezinkantolo okulinganiselwe, futhi ngokuvamile kukuwe NgoLwesine ntambama futhi ngoMsombuluko ntambama. Ngakho ungenawo ukuya enkantolo yokudlela kabili, kungcono ukucacisa amahora yokubonisana ngqo zemibango , bese kudingeke uhlele Ukuvakashela ijaji ngalesi sikhathi.
ezinkantolo ezahlukene - izindlela ezahlukene
Futhi uzinake Kuyaphawuleka ukuthi izikhalo ezinkantolo ezihlukahlukene kungaba wayisebenzisa ngendlela ehlukile inqubo ukujwayelaniswa ngemisebenzi yasendlini. Ngakho, ezinye izikole ucele qiniseka ukubhala isicelo ezifanele, kodwa nganoma imiphi imininingwane enjalo ngokuvamile ecacisiwe kusayithi. Into esemqoka - qiniseka ukuletha passport yakho, kanye pre-ucacise igama lejaji elizohola libona indaba yakho.
Ifayela icala phezu ingxabano loan ikakhulu zihlanganisa amashidi-100, kodwa okuningi kwezinye izimo ezibonakalayo. Ukuze uhlole endaweni ngeke isebenze, ngakho mina nje uzame ifotho kubo, ukuze kamuva kwakunokwenzeka ukuba sihlaziye konke esimweni esikhululekile kakhudlwana. Isetshenziswa efonini lanamuhla ikhamera izici ikhwalithi enhle, kodwa okungcono Yiqiniso, ukudubula ikhamera. Cishe, ukusetshenziswa kwalezi izinto zizoba usizo hhayi kuwe kuphela kodwa futhi credit ummeli wakho, uma usasebenzisa amasevisi ochwepheshe.
Key, uzodinga ukuthatha isithombe - is ukunikeza isitatimende kwesimangalo, ngakho-ke ngeke kudingeke uhlole kwasekuqaleni. Kulesi yasebhange ngolimi lomthetho ngokugcwele esachazwa umlando ubuhlobo bakho ebhange, bese idluliselwe uhlu izimangalo kuwe kusuka enkampanini yezimali, okuyinto ke ufuna ukwethula kini ngokusebenzisa inkantolo ne ebhange. Prakthiza ebonisa ukuthi uma ungenayo imfundo zomthetho professional ke deal kuyoba nzima kakhulu butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi ezihlukahlukene lokhu. Kunoma ikuphi, ukubheka esigabeni lokugcina isimangalo, esho ngokukhethekile lokho lemali ebhange kuyadingeka, kanye isizathu sokuthi kungani ibhange Babala zayiqeda.
Uma uvumelana yokuthi inani eshiwo yasebhange, kuyinto ehluke ngendlela efanele, uma wenza kungukuthi edingekayo yokuqhuba noma yiziphi izenzo ezengeziwe - nje vakashela Isivivinyo kanye bathi uyavumelana ukuhlangabezana isimangalo. Uma ukuziba umhlangano ke umphumela uyoba nse.
Uma izidingo yebhange engavumelani nawe, uzodinga ukwenza umsebenzi omningi ukuze avikele amalungelo abo. Uzodinga afeze isheke enemininingwane izibalo, ukuhlaziywa nesivumelwano sokubolekwa, kanye izifundo zendlela isitatimende kwesimangalo kanye nesivumelwano sokubolekwa imali ihambisane ubufakazi zamanje. It is ngenxa yalesi sizathu, kutuswa ukusebenzisa abameli abaqeqeshiwe ungakwazi ukwenza konke lokhu umsebenzi ngawe.
Yinde kangakanani leyo sokubeletha? Indlela yokwenza sokubeletha?
Ihhotela Akubizi e Suzdal. Amahhotela, isivakashi izindlu. Ukubuyekeza, Amanani
I-quarry elalilahlekelwe itekisi "Lena Lena": incazelo nesithombe